Ifampizarana ilay izy
Mbola tsy tena miely patrana ny Internet any Cuba. Soa ihany fa nanokatra toerana fijerena Internet ny orinasa iray momba ny telefaonina. Midangana be anefa ny sarany, ka nanome soso-kevitra an’ireo fiangonana ny biraon’ny sampana mba handraisan’izy ireo soa avy amin’ny jw.org. Mpitory iray no asaina maka lahatsoratra, zavatra noraisim-peo, ary video avy ao amin’ny jw.org, ary zaraina amin’ny mpitory hafa ilay izy avy eo. Tena nety ilay hevitra.
Nampandeferiny indray ilay finday
Mipetraka any amin’ny Repoblikan’i Géorgie i Teona sy Tamuna, izay folo taona sy valo taona. Mba te hahazo finday izy mirahavavy. Nampanantena àry ny bebeny hoe homeny amin’ny vola fisotroan-drononony izy mirahavavy, isam-bolana, mba hividianana finday. Maty tampoka anefa ilay bebeny. Nomen’ny havany azy mirahavavy àry ny vola fisotroan-dronono farany azon’ny bebeny, mba hividianana an’ilay izy. Nisaintsaina tany izy roa kely, dia avy eo nanoratra tany amin’ny fiangonany hoe: “Fantatray fa hanomboka afaka tapa-bolana ny fanorenana ny Efitrano Fanjakana vaovao eto T’erjola. Tena naniry hanohana an’io asa io i Bebe. Naleonay mirahavavy àry omena ny fiangonana ny vola fisotroan-drononony manontolo toy izay hividianana finday. Mba anamboary efitrano tsara tarehy izahay.”
Soratra Grika amin’ny teny tetum
Ny teny tetum no fiteny be mpampiasa indrindra any Timaoro Atsinanana. Navoaka tamin’ny 17 Janoary 2014 Ny Soratra Grika Kristianina—Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao amin’io fiteny io. I Geoffrey Jackson, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, no nanao izany tao Dili renivohitra. Ny Eglizy Katolika ihany teo aloha no nanonta sy nivarotra ny Soratra Grika tamin’ny teny tetum. Tsy mba navelany hividy tamin’izy io ny Vavolombelon’i Jehovah, na ireo olona nahiahiny hoe nianatra Baiboly tamin’izy ireo. Be diso anefa ny azy sady misy hevitra tsy voadika. Ntaolo be koa ny teny ampiasainy. Hafa mihitsy ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao. Hoy i Darren, misionera any Timaoro Atsinanana: “Gaga ny olona eto mahita hoe marina tsara ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao, ka tonga dia mangataka amin’izy io ry zareo. Hitany hoe mora vakina izy io sady ngeza tsara ny soratra. Tsy manana jiro mazava tsara mantsy ry zareo. Maro amin’ireo nahazo tamin’izy io izao no efa mianatra Baiboly.”
‘Hitan’i Jehovah aho hoe mendrika’
Macédoine: Mpitory mampiasa bokikely amin’ny teny rômania
Lasa misy ekipa raikitra mandika teny amin’ny teny rômania any Macédoine, nanomboka tamin’ny Janoary 2014. Nahazo alalana koa izy ireo mba hamoaka boky amin’ny soratra sirilika, fa tsy amin’ny soratra romanina fotsiny. Tena manampy an’ireo olona miteny rômania izany satria ny soratra sirilika no teny mahazatra azy, sady io rahateo no soratra tena ampiasaina any Macédoine.
Tena nanohina ny fon’ny olona maro miteny rômania izany ezaka nataon’ny fandaminan’i Jehovah izany. Hoy ny anabavy iray: “Matetika aho no ambanimbanin’ny olona hafa fiaviana, satria fotsiny hoe miteny rômania. Hitan’i Jehovah anefa hoe mendrika ny hahazo boky amin’io fiteniko io aho, ary tena mahafaly ahy izany. Vao mainka aho izao te hifandray akaiky aminy.”
‘Hitan’i Jehovah hoe mendrika ny hahazo boky amin’ny fiteniko aho, ary tena mahafaly ahy izany’
Niampy ny tany iandraiketan’ny sampan’i Etazonia
Ny sampan’i Etazonia indray no miandraikitra ny asa any Jamaika sy ny Nosy Caïmans, nanomboka tamin’ny 1 Febroary 2014. Mitombo indray ny mpitory ho tafaray amin’ireo Vavolombelona 1 200 000 mahery, ao amin’ireo faritany iandraiketan’ny sampan’i Etazonia. Anisan’izany i Bahamas, Bermudes, Nosy Turks sy Caïques, Nosy Vierges Amerikanina sy Britanika, Porto Rico, ary ireo fanjakana 50 any Etazonia.
Mpisava lalana any Japon
Efa hatramin’ny ela ireo rahalahy sy anabavy any Japon no tia manao ny asan’ny mpisava lalana. Mitana ny laharana fahefatra i Japon eran-tany, raha ny isan’ny mpisava lalana no resahina. Niampy 2 646 indray ny mpisava lalana any, rehefa nanomboka ny taom-panompoana 2014, ka lasa 65 668. Ny antsasany mahery amin’ny mpitory any no mpisava lalana, tamin’ny Martsa 2014, raha isaina koa ny mpisava lalana mpanampy sy manokana.